Ngabe i-e-commerce isinikeza impilo engcono? | Ezezimali Zomnotho
U-Alejandro Vinal | | Ikhaya
Ngaleli hlobo ngithenge ikhava yeselula yami yi-Amazon futhi uma ngaleso sikhathi ngangiqasha I-Amazon Premium Ngesikhathi sokulinga, i-oda belizofika mahhala futhi lisheshe, ngakho-ke angizange nginqikaze umzuzwana. Njengoba kuzokwenzeka kubantu abaningi, ngoba kuyinjongo yenkampani, ngemuva kwenyanga ngikhohliwe khansela okubhaliselwe futhi bangikhokhisa ama-euro angama-14 unyaka wokuthumela kwamahhala.
Bekuze kube kule mpelasonto lapho bengifuna ukufaka enye i-oda, lapho ngibona ukuthi i-akhawunti yami iyimali ekhokhelwayo nokuthi ngakho-ke yonke imiyalo izoba mahhala unyaka owodwa. Okwesikhashana bengingabaza ukuthi ngandlela thile, ngizama ukugomela i- amalungelo abathengi bese ubanga ama-euro ayishumi nane noma cha. Ekugcineni ngakhetha eyokugcina, ngicabanga ukuthi lawo ma-euro ayishumi nane azophela kukhishwe.
Futhi Ngenqaba khansela i-akhawunti ye-premium ngoba bengicabanga ukuthi ukukwazi ukubuza cishe noma yini engikudingayo nokuthi mina thumela ikhaya »mahhala» ungafaka isandla ku- ukwenza ngcono ikhwalithi yempilo yami. Iqiniso ngukuthi kulolu hlelo lwezomnotho lapho okubalulekile kuyimali nokuthola inzuzo enkulu kunazo zonke ezinkampanini, usuku nosuku zisicindezela kakhulu ukukhangisa futhi zisenzela izidingo ezintsha kwesinye isikhathi ezingokoqobo kepha kwesinye isikhathi kungenjalo. Kulo mongo, isikhathi sisebenzisa ini ukusetshenziswa kuningi, Ngingasho kakhulu; lapho singasebenzi ukuthola imali, sibheke indlela yokusebenzisa nokuyisebenzisa. Ungayingabaza le mbono, kepha ucabange ukuthi isikhathi esingakanani a Matrimonio noma umama wekhaya ozinikele ekwenzeni ukuthenga okudingekayo ukondla wonke umndeni, umuntu angajwayela umqondo we inani lesikhathi ukuthi sinikela ekusetshenzisweni.
Yilapho i-e-commerce ingasinikeza khona i- ukusetshenziswa ngokushesha: ngokugwema ukuhamba, ulayini ... ephephile: ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa singakwazi vele ukuthi yini abanye abantu bacabanga kumikhiqizo esiyifunayo futhi njengoba isici somuntu singenelela neze, kuphela ukukhangisa bangakwazi kholisa, kepha ungalokothi usebenzise i- amabutho okuthengisa, ukuthi yize kwesinye isikhathi ingaseluleka ukuthi yimuphi umkhiqizo ofanele izidingo zethu, kwezinye izikhathi ingawusebenzisa imininingwane yangaphakathi (umugqa wokuthengisa) ukuzama ukuqondisa isinqumo sethu maqondana nomkhiqizo oletha inzuzo enkulu kwezentengiso ... futhi ekugcineni, ngenxa ye-inthanethi singajwayela ukusebenzisa onokwethenjelwa ngokwengeziwe. Ngakho-ke, ku-e-commerce umuntu angakhuluma nge ukuncintisana okumsulwa futhi okusobala ukwedlula ezitolo eziningi ezibonakalayo.
Ukukwazi ukusizakala ngalezi zinzuzo zokuhweba ngogesi kuhlobene kufayela le- qondisa nomuntu ngamunye. Kungenzeka ukuthi umuntu angafuni ukusizakala ngezinzuzo ezilethwayo futhi umane nje ayisebenzise njengethuluzi elithanda ngokwengeziwe ikhasimende, okuvame kakhulu, ikakhulukazi kulawo maklayenti we »amakilabhu athengisa ngasese»Lokho kuletha ingcindezi ngendlela yomkhawulo wokuphakelwa ngesikhathi nangesitoko.
Futhi yize kuliqiniso ukuthi ingasetshenziswa futhi njengempikiswano ephikisayo isivumelwano esiqonde kakhulu ezitolo zomzimba, kuya ngokuya kuqala kokunikeza wena, kepha ekugcineni kosuku, lokho kwelashwa akukaze kweqe ngaphezu kwe-a ubudlelwano obungasho lutho.
Yingakho, kimi nakulabo abaziyo balawule abathengi babo, ukuhweba nge-elekthronikhi kungaba nomthelela impela ku ikhwalithi yempilo engcono; isikhathi ongasisebenzisa ngokuyinhloko ku Ukuxoshwa nasekuthengeni, ngoba ukuhweba ngogesi kunenye inzuzo ephelele: umuntu ukuthathela imikhiqizo (lokho okwaziwa ngokuthi ukukhetha), leso sikhathi engingasisebenzisa kulokho engikunqumayo futhi, ngiyaqiniseka ukuthi engikuthengayo ikhwalithi ukuthola imibono nokuhlangenwe nakho kwabanye abathengi.
Ngabe i-e-commerce iyalithuthukisa ikhwalithi yempilo yakho? Ngabe ucabanga ukuthi kunalokho kuyancipha? Ucabanga ukuthi kuzoba yini ezitolo ezibonakalayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ikhaya » Ngabe i-e-commerce isinikeza impilo engcono?
Ishicilele okusalungiswa kohlelo lwezomnotho lwePodemos